को बन्ला नेपाली राष्ट्रिय टिमको नयाँ कप्तान? :: Setopati
को बन्ला नेपाली राष्ट्रिय टिमको नयाँ कप्तान?
सीताराम कोइराला काठमाडौं, असोज २९
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको एक दशक कुशल नेतृत्व गरेका पारस खड्काले मंगलबार कप्तान पदबाट अप्रत्यासित रूपमा राजीनामा दिए।
सन् २००९ मा २२ वर्षको उमेरमा कप्तान बनेका पारसले नेपाली क्रिकेटको निरन्तर उचाइमा पुर्‍याइरहे।
डिभिजन-५ हुँदै नेपाली क्रिकेट टिमलाई एकदिवसीय मान्यता दिलाउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।
पहिलो एकदिवसीय र टी-२० सतक हान्ने रेकर्ड बनाएका पारस मैदानभित्र जति आक्रामक खेल्छन् मैदान बाहिर आफ्ना कुरा निडरका साथ राख्ने स्पष्ट वक्ताको रूपमा चिनिन्छन्।
नयाँ कप्तान को बन्छ भन्ने चर्चा गर्नुअघि पारसले छाड्नुको कारणमाथि चर्चा गरौं।
पछिल्लो दस वर्ष पारसले मैदान बाहिर नेपाली क्रिकेट विकासका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहे।
मंगलबार कप्तानबाट पद त्याग्दै गर्दा पनि उनले भनेका छन्,'नेपाली क्रिकेटलाई माथि पुर्याउन खेलाडीको मिहिनेतले मात्र पुग्दैन। जो-जो व्यक्तिहरू क्रिकेटमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।'
सन् २०१४ को टी-२० विश्वकप खेलेर फर्किएपछि पनि पारस लगायतका खेलाडीहरूले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका थिए।
आफ्ना सहकर्मी खेलाडीका समस्याबारे पारस सधैं क्रिकेटको व्यवस्थापनसँग जुधे।
पारसले आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइटमा खेल जित्दा समेत आफ्नो टोलीका आधा भन्दा बढी खेलाडीले सार्वजनिक सवारी साधनमात्र प्रयोग गर्ने हैसियतमा रहेको भन्दै बेखुसी व्यक्त गरेका छन्।
मंगलबार कप्तान पद त्याग्दै गर्दा पनि पारसले भनेका छन् - ‘खातामा करोडौं हुने तर खेलाडीको भविष्य सुरक्षित नभए क्रिकेट विकास हुँदैन।’
सन् २०१४ मा पारसको नेतृत्वमा खेलाडीहरू क्यानमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए।
उजुरीपछि अख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ, उपाध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलसहित १० जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दयार गरेको थियो। तर दुई वर्षपछि सबै पदाधिकारीले सफाइ पाए।
पदाधिकारीले सफाइ पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले क्यानलाई लामो समय निलम्बन गर्‍यो।
खेलाडीले उजुरी हालेका तिनै पदाधिकारी २०७२ मा भएको विवादित निर्वाचनमार्फत् फेरि क्यानको नेतृत्वमा आएका थिए। चतुरबहादुर चन्द अध्यक्ष रहेको उक्त समितिलाई खेलकुद परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले मान्यता दिएनन्।
रमेश सिलवालको अध्यक्षमा नयाँ तदर्थ समिति बनाए। उनै सिलवाल हाल खेलुकद परिषद्का सदस्यसचिव छन्।
तीन वर्षपछि पारसले उजुरी गरेका उनै चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वको समूह फेरि क्यानमा निर्वाचित भएको छ। जससँगै आइसिसीले क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा पनि गरेको छ।
निलम्बन फुकुवा भएको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै पारसको राजीनामा घोषणा भएको छ। त्यसैले पारसले कप्तानबाट राजीनामा दिनुलाई क्यानसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई नकार्न सकिँदैन।
त्यसो त पारसले उपयुक्त समयमा आफूले निर्णय लिएको बताएका छन्।
'मैले धेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु परेको थियो। २००९ देखि कप्तान, विगत ४ वर्षदेखि छनोटकर्ता, मेन्टर अनि खेलाडी त भैहाल्यो। सबै कुरासँगै राम्रो खेल्नु पर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यसैले कप्तानको रूपमा ब्रेक लिने यो उपयुक्त समय हो।'
पछिल्ला वर्षमा पारसमा कप्तानीसँगै नेपाली क्रिकेटको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि थियो। क्यानको निलम्बनसँगै पारसले खेलाडीको छनोटदेखि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण, आइसिसीसँग समन्वय गर्ने काम पारसले अप्रत्यक्ष रूपमा गरेका थिए।
पारसले सांकेतिक रूपमा नयाँ नेतृत्वलाई काम गर्नका लागि आफूले कप्तानबाट राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिएको बताएका छन्।
अध्यक्ष चन्दले पुराना कुरा सम्झिनुभन्दा नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्नु पर्ने तर्क गरेका छन्।
पारसले आफू फेरि कप्तानको रूपमा नफर्कने स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैले क्यानको नयाँ कार्यसमितिसामू नयाँ कप्तानको छनोट गर्ने चुनौती छ।
छनोट समिति कस्तो हुने र छनोटको आधार के हुने विषयमा क्यान अझै स्पष्ट छैन। किनभने आइसिसीले क्यानको निलम्बन फुकुवा गरे पनि संक्रमणकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यो योजना कस्तो हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट छैन।
'१-२ दिनमा हामीलाई निलम्बन फुकुवाको पत्र आउला, त्यसपछि आइसिसीसँग सहकार्य गरेर कसरी काम गर्ने विषयमा एउटा समयरेखा बनाउन पर्ने मेरो बुझाइ छ,' क्यानका महासचिव प्याकुरेल भन्छन्।
पारसले कप्तान छाडेपछि अब क्रिकेटका नयाँ कप्तानसँग क्यानसँग डिल गर्ने उत्तिकै क्षमता आवश्यक हुन्छ।
अब नयाँ कप्तान को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा गरौं।
नेपालले निकट भविष्यमा खेल्ने प्रतियोगिता मंसिर १५ देखि नेपालमा हुने तय भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) हो।
सो प्रतियोगिताका लागि क्यानले नयाँ कप्तान नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
कप्तान बन्न सबभन्दा मुख्य सर्त खेलाडी प्लेइङ ११ मा निर्विकल्प हुनुपर्छ। त्यसपछि क्रिकेट दिमाग र म्यान-मेनेजमेण्ट हो।
पारसको राजीनामापछि क्यानकासामू दुई खाले विकल्प हुनेछ।
पहिलो अनुभवी खेलाडी छानेर पारसपछिको युगको सहज सुरूआत गर्ने र कुनै युवा खेलाडीलाई उपकप्तान बनाएर भविष्यको कप्तानका लागि तयार गर्ने।
अर्को भनेको कुनै युवा खेलाडीलाई अहिले नै कप्तान बनाउने र पारस र अरु अनुभवी खेलाडी खेलिन्जेलमै उनीहरूको सन्यास पछिका लागि तयार गर्ने।
पारस, ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषवाकर लगभग एकै उमेरका हुन् र सँगसँगै सन्यास लिनेछन्। उपकप्तानका रूपमा पनि कप्तानका लागि खेलाडीलाई तयार गर्न सकिन्छ। तर अहिले नै युवा खेलाडीलाई कप्तान बनाए अनुभवी खेलाडीको सन्यास पछिको समयमा राम्रो नेतृत्व तयार हुनेछ।
क्यानले अनुभवका आधारमा चयन गरे नयाँ कप्तानको रूपमा ज्ञानेन्द्र मल्ल सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छन्।
पारससँगै उपकप्तानको जिम्मेवारी पाएका ज्ञानेन्द्रको राम्रो पक्ष भनेको अनुभव हो।
कप्तान पारसको अनुपस्थितिमा ज्ञानेन्द्रले नेपाली राष्ट्रिय टिमको कप्तानी समेत गरिसकेका छन्।
पछिल्लो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) मा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो टिम ललितपुर प्याट्रिओट्सलाई च्याम्पियन बनाएका थिए।
ज्ञानेन्द्रपछि कप्तानको रूपमा हेरिएका अर्का खेलाडी शरद भेषवाकर हुन्।
शरद घरेलु फ्रेन्चाइज लिगमा सबभन्दा सफल कप्तानको रूपमा चिनिन्छन्।
उनले आफ्नो नेतृत्वका टिमलाई कि त फ्रेन्चाइज लिगको उपाधि जिताएका छन् कि त फाइनलमा पुर्‍याइएका छन्।
शरदले गत संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) को फाइनलमा आफ्नो टिम पोखरा पल्टनलाई उपाधि जिताएका थिए। शरद खासगरी युवा खेलाडीलाई मौका दिने कप्तानको रूपमा चिनिन्छन्।
सिंगापुर र ओमान भ्रमणका लागि टिममा नपरेका शरदका लागि आफ्नै फर्म बाधक बन्न सक्छ। कप्तानको रूपमा आफूलाई उभ्याउने हो भने शरदले खस्किएको फर्म र फिटनेस सुधार गर्न जरुरी छ। अर्का अनुभवी खेलाडी विनोद भण्डारीले पछिल्ला टी-२० फ्रेन्चाइज लिगमै कप्तानको जिम्मेवारी पाउन छाडिसकेका अवस्थामा उनी कप्तान बन्ने सम्भावना झिनो छ।
अनुभव नछानेर युवाको चयन गरेमा सोमपाल कामी र दीपेन्द्रसिंह ऐरी दोस्रो पुस्ताका कप्तानको रूपमा बलिया नाम हुन्।
सोमपाल र दीपेन्द्र दुवैले टी-२० फ्रेन्चाइज लिगमा कप्तानी गरिसकेका छन्।
२०७४ को डिपिएलमा सोमपालले आफ्नो टिम चौराहालाई च्याम्पियन बनाएका थिए।
दीपेन्द्रको नेतृत्वमा फ्रेन्चाइज टिमले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न नसके पनि उनी सिंगापुर र ओमान भ्रमणका लागि उपकप्तान छनोट भएका थिए। जसले उनीलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमको भावी कप्तानको रूपमा लिइएको थियो। दीपेन्द्रसँग नेपालको यु-१९ टिमको कप्तानी गरेको अनुभव पनि छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट वृत्तमा नेपालका सबभन्दा चर्चित क्रिकेट सन्दीप लामिछानेसँग पनि फ्रेन्चाइज क्रिकेट टिमको कप्तानी गरेको अनुभव छ।
सन्दीपले गत संस्करणको पिपिएलमा विराटनगर टाइन्टन्सको नेतृत्व गरेका थिए। तर उनको टिम समूह चरणबाटै बाहिरियो। त्यसअघि उनी नेपालको यु-१९ टिमको पनि कप्तान थिए। त्यहाँ पनि उनी सफल हुन सकेनन्।
उनको स्थानमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज २९, २०७६, २१:१७:००